किन परेनन् यी सात कृतिहरु मदन पुरस्कारको सुचिमा ? | "हरेक घरमा धारो होस्, हरेक गाउँमा सिंचाइ होस्"
किन परेनन् यी सात कृतिहरु मदन पुरस्कारको सुचिमा ?
July 22, 2019 by एस.डि.अर्पण
सामाजिक सञ्जालमा मदन पुरस्कारको सूचीमा पर्नु पर्ने पुस्तकको मुख्य नाम यी भए पनि अन्य दर्जनौ पुस्तकलाई पनि पाठकले सम्झिरहेका छन् । यद्यपि, माथि उल्लेखित पुस्तकहरुमा भने समीक्षकहरुको पनि समर्थन छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यी पुस्तकमध्ये धेरैले बजारमा चर्चा पाएका, पाठक पाएका कारण धेरै पाठकसम्म पुगेका पुस्तक हुन् । जुन पुस्तकका पाठक धेरै हुन्छन्, त्यही पुस्तकको चर्चा बढी हुन्छ । जबकि मदन पुरस्कार गुठीले आफ्ना निर्णयक मण्डलले पूर्णकालीक पाठक भएर आफ्नो लिस्ट पठाएको दाबी गरेको छ । धेरै पाठक हुनेवित्तिकै पुस्तकको गुणस्तर राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन तर यसले श्रष्टालाई आगामी दिनमा पुस्तकहरु प्रकाशन गर्न थप उर्जा दिने गर्दछ ।
श्रोत: अनलाईनखबर डट कम
← एन आर एन ए पोल्याण्ड “को जरुरी सुचना
सिसेक्पा तङनाम कार्यक्रमको अबसरमा पृथक मौलिकता झल्कियो पोर्चुगलमा (फोटो फिचर सहित ) →